iiii virus [Problem]
Myanmar IT Resource Forum » HELP ZONE » » Virus Problems » iiii virus [Problem]
1 iiii virus [Problem] on 11th August 2010, 4:04 pm
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2010-08-04
ကျွန်တော် စက်မှာ iiii ဆိုပီးတော့ virus ကိုက်နေတယ်.... ဒီကောင်က Folder လည်းပွားတယ်...နောက်ပီးတော့ start up ထဲလည်း ဝင်ကိုက်နေတယ်...... ဘာနဲ့ သတ်ရင် ရမလဲ မသိဘုး သိတဲ့ သူများရှိရင် [You must be registered and logged in to see this link.] ကိုမေးပို့ သည်ပဲ ဖြစ်စေ .. Link လေးပဲ ဖြစ်စေ ညွှန်းပေးကြပါနော်..... ဘာကောင်မှန်းကိုမသိတာ သတ်တဲ့ software လေးရှိရင်လည်း Link လေး ပေးကြပါလို့ 
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.... [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
Last edited by solakoko on 11th August 2010, 4:16 pm; edited 1 time in total (Reason for editing : Title,Tag)
2 Re: iiii virus [Problem] on 11th August 2010, 4:26 pm
taskmgr ခေါ်ပြီး taskkill လုပ်
run>msconfig>မှာ startup list ထဲက !!! ကို uncheck ပြန်လုပ်
သူ့ ရဲ့ Location ကိုတစ်ခါတည်းမှတ်ပြီးတော့ ဖိုင်ရှိတဲ့နေရာပါ သွားဖျက်နော်
All program>start up ထဲမှာ လဲရှာဖျက်နော်
ပြီးရင် antivirus ကောင်းကောင်း တစ်ခုနဲ့virus scan လုပ်ကြည့်
ဘာဗိုင်းရပ်စ် မှန်းတော့ ကျနော်လဲ မသိဘူးခင်ဗျ။
3 Re: iiii virus [Problem] on 12th August 2010, 8:20 am
ဟုတ်ကဲ့ စက်ကို iii ရှိတဲ့ နေရာတွေကို လိုက်ဖျက်တယ်....
ပြီးတော့ သူ က start up ထဲကိုပြန်ဝင်တယ်...ဘယ်လိုသတ်ရမလဲတောင်မသိတော့ဘုး
Kasper နဲ့ သတ်တယ်.... မရဘူး...... သတ်ပီးတော့ restart ချ လည်း ပြန်ဝင်တယ်..
4 Re: iiii virus [Problem] on 12th August 2010, 2:18 pm
ညီလေးရေ NOD32 Antivrus နဲ့ သတ်ပါ
KIS ကို ပြန်ဖြုတ်ပီး ရမ်းပါ NOD 32 မရှိဘူး ဆိုရင်
5 Re: iiii virus [Problem] on 12th August 2010, 2:23 pm
အဆင်မပြေမှာ စိုးလို့ တင်ပေးလိုက်တယ် ရမ်းပုံရမ်းနည်းကို notepad နဲ့
ဖိုင်ထဲ့မှာ ညီလေး ကြည့်ကြည့်လိုက် နော်
6 Re: iiii virus [Problem] on 26th September 2010, 8:50 am
ကျေးဇူးပဲ ကိုနေဦးသစ်ရေ ကျွန်တော်လဲအဲ့ဒီကောင်ကိုက်နေတာဗျ..
ခုတော့ စပါယ်ရှယ် ဆုံးမလိုက်တော့မယ်.... အစ်ကို့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်...
7 Re: iiii virus [Problem] on 26th September 2010, 6:23 pm
Kan wrote: ကျေးဇူးပဲ ကိုနေဦးသစ်ရေ ကျွန်တော်လဲအဲ့ဒီကောင်ကိုက်နေတာဗျ..
အဲ့ကောင်ရှိသေးရင် ကျွန်တော့ကိုမေးလ်နဲ့ ဖြစ်ဖြစ်ပို့ ပေးပါလား။ [You must be registered and logged in to see this link.] ပါ။
8 Re: iiii virus [Problem]